Siyakwamukela ku-Stumble Inn! Ukuphumula okuthulile! - I-Airbnb
Siyakwamukela ku-Stumble Inn! Ukuphumula okuthulile!
Upper Kingsclear, New Brunswick, i-Canada
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Marie
Indlwana yethu ethokomele itholakala kuma-acres ayishumi nambili omhlaba omuhle owenziwe ngamapulangwe. Sifuna ukuhlala kwakho kujabulise futhi sinikeze konke ukunethezeka kwekhaya. Konke okudingayo yizindawo zakho zokudla nezinto zakho.
Sicela wazi ukuthi le ndlu isendaweni yasemaphandleni futhi iyimizuzu engamashumi amathathu uma uhamba ngemoto ukuya e-Fredericton kanye/noma e-Nackawic.
Siyatholakala uma udinga noma yini kodwa sizohlonipha ubumfihlo bakho ukuze ukwazi ukujabulela isikhathi sakho.
Siyazamukela izinja zakho eziziphatha kahle, eziqeqeshiwe zendlu.
Indlwana yethu iza nezitsha zokupheka, izitsha, izitsha, amabhodwe namapani, amathawula ezitsha kanye nekhabethe, umshini wekhofi ongasebenzisa izinkomishi zekhofi, izinkomishi zekhofi, izinkomishi, izingilazi, izingilazi zewayini, i-microwave, ifriji, isitofu, i-toaster futhi sine-corkscrew uma kungenzeka! Siphinde sibe ne-bbq ongayisebenzisa.
Igumbi lethu lokuphumula elinethezekile liyindawo ekahle kakhulu yokuzivocavoca nokujabulela imfudumalo yendawo yethu yomlilo eyakhiwe ngamatshe e-propane kulezo zinsuku ezibandayo zasekwindla nasebusika ngenkathi ujabulela isiphuzo sakho noma udlala omunye wemidlalo yebhodi enikeziwe.
I-Wifi iyatholakala kodwa sicela uqaphele ukuthi indawo yethu yasemaphandleni ayinayo i-f op!
Indlu yokugezela inamathawula ahlanzekile, iphepha lasendlini yangasese, i-shampoo, insipho nomshini wokomisa izinwele.
Amakamelo okulala amathathu anezinto zokulala, imicamelo nezingubo ezengeziwe.
4.95 · 63 okushiwo abanye
Uma uthanda ukutshuza eqhweni noma ukushayela i-ATV khona-ke indawo yethu iyindawo ekahle kakhulu ongayisebenzisa. Umzila wethu omkhulu wokushayela wenza kube lula ngawe ukupaka omahamba-nendlwana bakho futhi ukhulule i-snowmobile yakho noma amavili. Kunemizila eseduze futhi ungashayela khona lapho usendlwaneni yethu.
Indawo yethu iyindawo ekahle kakhulu yemibuthano yomndeni noma yomuntu ofuna indawo enokuthula , ethulile ezungezwe yimvelo. Kuphinde kube yiholide elinemfudumalo kubantu abashadile abafuna isikhathi sokuzikhipha bodwa kukho konke.
Kutholakala ngemizuzu engu-18 nje yokushayela ukuya e-Harvey Village of Harvey, N.B. lapho uzothola khona isiteshi segesi/i-Pizza Twice, Isitolo Sezwe sika-Smith ngezidingo zokudla kanye nobulula be-Black 's nayo enendawo yokuphuma utshwala ne-cafe. Bathengisa ubhiya we-Grid Ale, ubhiya wezandla we-Think Brewing kanye ne-Big Fiddle Still, isiphuzo se-vodka esetshenzisiwe konke okukhiqizwe endaweni yase-Harvey, N.B.
Ukushayela imizuzu eyishumi nanhlanu ukuya e-Mads Traffic Stop/Acorn Restaurant kanye ne-Kings Landing History Settlement.
I-Mactaquac Regional Park iyibanga lemizuzu engu-25 uma uhamba ngemoto
Ukushayela imizuzu engamashumi amathathu ukuya e-Fredericton futhi ngaphansi nje kwehora e-Crabbe Mountain Ski Hill.
Ungafinyelelwa ngomyalezo noma nge-imeyili kalula.